I-UleFone T2 Pro kunye ne-Ulefone X: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, MWC, Ulefone
Uhlobo lwaseTshayina Ulefone yenye yeendwendwe ezininzi kwi-MWC 2018. Ngale ntsasa bazise iifowuni zabo ezimbini kumnyhadala owaziwayo we-telephony e-Barcelona. Ngokukodwa, banikezele ngeefowuni eziphakathi eziphakathi. Sibhekisa kwi-Ulefone T2 Pro kunye ne-Ulefone X. Abangaphambili bathembisa ukuba babe yiflegi entsha, ngelixa elokugqibela liphefumlelwe yi-iPhone X.
Ke siyabona ukuba uphawu lwaseTshayina lusishiyile sineentlobo ngeentlobo kunye neefowuni ezimbini ezinomdla ezithembisa ukunika okuninzi ukuba sithethe ngazo. Yintoni egqithisile, Sele siyazi imigaqo ye-Ulefone T2 Pro kunye ne-Ulefone X. Zigcinele ntoni ezi fowuni kuthi?
I-Ulefone luphawu olufumana ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Ke ubukho bakho kwi-MWC 2018 bunokuhamba indlela ende ekufumaneni ukubonwa okungaphezulu. Ukongeza, uphawu izisa iifowuni ezimbini phakathi kuluhlu oluphakathi, apho uhamba kamnandi. Sikuxelela ngakumbi ngefowuni nganye nganye.
Le fowuni imiselwe ukuba ibe liphawu elitsha lophawu lwaseTshayina. Isixhobo esipheleleyo esinoyilo olulungileyo olubonakala ngaphezu kwazo zonke iifowuni kwikhathalogu yayo. Ke maninzi amathemba abekiweyo kuyo. Oku kukubalulwa kwesixhobo:
Ukucaciswa kobuchwephesha Ulefone T2 Pro
Umzekelo T2 Pro
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo
Isikrini 6.7 intshi nge-FHD + isisombululo
Inkqubo IHelio P70 Octa-core
GPU I-ARM Mali-G72 MP4 800MHz
Ikhamera esemva Ikhamera ezimbini 21 MP + 13 MP
Conectividad 4G 3G LTE WiFi 802.11 a / b / g / n / ac iBluetooth 4.1
Ezinye izinto Umfundi weminwe odityanisiweyo kwiscreen sokubonwa kobuso
Ubukhulu 78.3mm x 165.9mm x 7.7mm
U bunzima I-159 gram
Njengokuba ubona, Esi sixhobo siza kuba sesinye sezona zinto zintle esele zenziwe luphawu lwaseTshayina ukuza kuthi ga ngoku. Ngokuqinisekileyo inokuba yifowuni ethengisa kakuhle kwaye iyaphumelela kwintengiso. Ukongeza, iba yenye yee-smartphones zokuqala kwintengiso ngaphakathi sebenza noHelio P70 njengeprosesa. Iprosesa esazi ngayo idatha kwezi ntsuku. Kwaye kubonakala ngathi yeyona processor ilungileyo iMediaTek yenziwe ukuza kuthi ga ngoku.
Ngoko ke, le Ulefone T2 Pro izakusinika amandla, ukusebenza kakuhle kunye nokusetyenziswa kwamandla. Yintoni ebuzwa ngabasebenzisi bonke kwifowuni. Ukongeza, inebhetri enkulu, eya kuyinika inkululeko eninzi.
Kwakhona, Enye inkcukacha yale fowuni eya kunika okuninzi ukuba ithethe ngayo inzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen. Le yinto brand esele izamile okwethutyana. Iya kuba yinto enomdla ukubona ukuba isebenza njani kwesi sixhobo ukusuka kuphawu lwesiTshayina. I-Ulefone T2 Pro ikwanokubonakala kobuso.
Kwindawo yesibini sifumana le fowuni uyilo oluphefumlelwe yi-iPhone X. Ukusukela ukuba uphawu lwaseTshayina lukhethe iscreen esifanayo kwifowuni. Into eya kuthi ngokuqinisekileyo ivelise uninzi lwezimvo ezivela kubathengi. Le yinkcazo yesixhobo.
Ukucaciswa kobuchwephesha Ulefone X
Isikrini 5.85 intshi ene-18: 9 ratio kunye HD + resolution
Inkqubo MT6763 I-Octa-core yiMediaTek
Ikhamera esemva Ikhamera ezimbini 16 MP + 5 MP
Ikhamera yangaphambili 13 MP
Ezinye izinto Umfundi ongasemva weminwe
Ibhetri 3.300 mah
Njengokuba ubona, Esi sixhobo sikhethe iscreen esifana neso se-iPhone X. Kuba inotshi ephezulu. Iinkcukacha ezibonakala ngathi zithandwa kakhulu kwintengiso, kuba siyabona ukuba ezinye iimveliso zizama njani ukulinganisa. Ukuphumla sijamelene noluhlu oluphakathi olunyulu, kunye nekhamera esemva elungileyo kunye nokubalulwa ngokubanzi okuhle.
Ezi okwangoku zimbini zedatha esingazazi malunga neefowuni ezimbini ze-Ulefone. I-brand ayikaphawuli ngexabiso ezi zixhobo zimbini ziya kuthi zifike ngalo kwimarike okanye ngomhla wokumiliselwa okunokwenzeka. Asazi ukuba iya kutyhilwa namhlanje okanye kamva kule veki. Kodwa, siya kuthi siqwalasele oko uphawu kufuneka lubhengeze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ulefone » I-Ulefone T2 Pro kunye ne-Ulefone X: Uluhlu oluphakathi lwe-Ulefone